Edere site Tranquillus | Apr 18, 2020 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
N'oge a, karịa ka ọ dị na mbụ, ị na-etinye oge gị izipu na ịnata ụdị niile mail. Ị na-eji "Eziokwu," "Ekele kacha mma" ma ọ bụ "ekele kacha mma" na-akwụsị ozi gị ugboro ugboro. Ị naghị eme atụmatụ d 'dee email nye onye isi gi. Ma ọ bụ gị na ndị ọrụ ibe gị ma ọ bụ ya na onye na-elekọta gị. Ga-achọ imeghari ma tinye ntakịrị akụkọ na ụkpụrụ ọma ị na-eji na njedebe email. Chohọrọ nkewa ahịrịokwu iji mechie ozi ga-agbakwunye ike. Mana n’ezie iji okwu na-ekwesịghị ekwesị ma ọ bụ kagbuo ụdị SMS nwere ike ibute njem njem. Enweghị ike ịdegara onye ọbụla akwụkwọ. Karịsịa na ụwa ọkachamara.
Ihe atụ 42 nke ọma usoro iji tinye na njedebe nke ozi-e.
Nke a bụ ihe atụ 42 nke nkwanye ugwu ị nwere ike iji kwụsị ozi ịntanetị gị n'ụdị. M pụtara mail na ọ bụghị leta. Ọ bụrụ n’ikpebie izipu akwụkwọ ozi site na email. O doro anya na-egosi na ahụ gị ozi nke ọnụnọ nke akwụkwọ, CV ma ọ bụ cover leta ihe atụ. N'agbanyeghi akwukwo nke idobere dika ihe mgbakwunye. Ọ bụrụ na ọ bụ leta, ọ ga - ejedebe n’ikwu okwu ọma mara mma.
Ekele m ekele m,
M ji ekele m,
Site na obi gị,
Ichoro gi ubochi oma
Nkwanye nkwanye ugwu diri gi,
Na nkwanye ùgwù zuru oke,
Ndị enyị enyị,
Ndị enyi m niile,
Ekele kacha mma,
Nabata m nke ọma
Nwee ututu ọma,
Nwee ezigbo ụbọchị,
Ezi uzu n’izu,
Nwee ezigbo izu ụka,
Ekele m niile,
Na agbamume m,
Ekele m site n'ekele m,
Na-echere nloghachi gị,
Na-ele anya imekọ ihe ọnụ
Nọrọ n'aka gị,
Na-ege gị ntị,
N'achọ iji iji ozi m mee nke ọma,
N'olileanya inyere gị aka,
Obi ụtọ n'ọgụ,
Ka oge na-echere nzaghachi gị,
Daalụ maka itinye uche gị,
Ezigbo onye nke gị,
GỤỌ Kọwapụta mmejọ na ọrụ: olee otu ndị na-agụ gị si ahụ gị?
Usoro omuma oge gboo gbakwunye na leta gị niile
Biko nabata, Madam, Sir, nkwupụta nke nkwanye ugwu m.
Biko nabata, Madam, Sir, nkwupụta nke mmetụta nkwanye ugwu m.
Biko nna m ukwu, kwere na akwara m na nkwanye ugwu.
Biko nabata, Madam, Sir, ekele m ekele m.
Biko nabata, nna m, nkwupụta nke nkwanye ugwu m.
Biko nara, onye nwe m, mmesi obi ike nke kwanyere m ugwu.
Anata, Madam, Nna m ukwu, ekele m.
Anata, Madam, Sir, ekele m nke ọma.
Biko nabata, Madam, Sir, ekele m kacha mma.
Biko, nabata, Madam, Nna m ukwu, mmesi obi ike nke kachasị m.
Anata, Madam, Sir, ekele m kacha mma.
Biko nabata, Madam, Sir, ngosipụta nke nkwanye ugwu anyị na obi anyị.
Biko nabata, Madam, Sir, ngosiputa nke obi anyi niile.
Jiri ụtụ nkwanye ùgwù m, biko nakwere, Madam, Sir, nkwupụta nke nchebara echiche kachasị m.
Chere nkwekọrịta gị, biko nabata, Madam, Sir, ekele m kachasị mma.
Ọ bụrụ na inwere mmasị na oru ngo a, ka anyị zute. Biko nabata, Madam, Sir, ekele m ekele m.
Na-echere nzaghachi gị, biko, nabata m, Madum, ekele m.
N’enye azịza n’aka gị, a na m arịọ gị, Madum, Sir ka obi dị gị mma ịnabata ekele m.
N'echiche a, m ga-enwe ekele, Madam, Sir, ịnabata ekele m.
N’inye azịza nke m na-atụ anya ịdị mma, ana m arịọ gị ka ịnweta, Madam, Nna m ukwu, ekele m.
GỤỌ Ndepụta akwụkwọ ozi iji nabata ma ọ bụ jụ nguzozi na akaụntụ ọ bụla
Kpụrụ ọma kachasị mma maka ozi ịntanetị gị July 25th, 2021Tranquillus
gara agaAkuko banyere mmemme, ihe oru di nkpa iji mee ka ndi mmadu mara oru
-esonụTọọ igbe ozi igbe gị dịka igbe egwu
Usoro ide ihe na usoro ọgụgụ
Ndụmọdụ ise iji belata ahịrịokwu gị